🥇 ▷ Ku cayaar Minecraft Earth on Android isla markiiba adigoon sugin imaatinkaaga Spain ✅
Ku cayaar Minecraft Earth on Android isla markiiba adigoon sugin imaatinkaaga Spain
Ku dheji Minecraft Earth on Android
Dhowr bilood ka hor ayaan baranay warka. Mojang Wuxuu go’aansaday inuu hal talaabo u sii maro dunidiisa gaarka ah ee dabaqyada wuxuuna ku dhawaaqay imaatinka Minecraft Earth, cinwaanka Pokémon Go ee dadku ku ciyaari karaan taleefannadooda Android. Fikraddu waxay ahayd in la bixiyo nuxurka Minecraft oo lagu daray xaqiiqda jirta, sidaas darteed u oggolaanaya adeegsadayaasha inay dhisaan waxa ay rabaan oo ay ka fakaraan Real World ™, xitaa iyagoo ku raaxeysanaya ikhtiyaariga badan ee asxaabta kale inay sidoo kale iska kaashadaan hawsha hal abuurka ah.
In kasta oo wakhtigaas aan taariikho la siin, haddana shirkadda waxay u oggolaatay dhammaan kuwa daneynaya, iska diiwaangeliso degel internet ah si ay isugu dayaan nooca tijaabada, connoisseurs dabcan, in qaar uun la xushay ay ku raaxaysan doonaan beta. Oo sidaasay noqotay. Maalmo ka hor ayaa la shaaciyay bilowga in kasta oo cinwaanka laga gali karo shan magaalo adduunka: Mexico City, London, Tokyo, Seattle iyo Stockholm.
Beta beta-ka Android ayaa ugu dambeyntii halkan! Waxaan aad ugu adag nahay shaqada aan ku soo bandhigno cusboonaysiinta shan magaalo: Seattle, London, Tokyo, Stockholm, iyo Mexico City. Farsamaynta wanaagsan ee qof walba!
– Minecraft Earth (@minecraftearth) Ogosto 30, 2019
Websaydhka isdiiwaangalinta ee imtixaanka wali waa furan yahay waxayna balan qaadayaan inay sii balaarin doonaan dhulkooda, laakiin dabcan, helitaankan xadidan ayaa sababay niyad jabida dad badan oo rajeynayay inay si dhaqso ah u ciyaaraan halkii ay markii dambe la wareegi lahayeen. Arrintaadu ma tan baa? Hagaag, ogaada inay jirto wado kale si loo helo.
Waxaan tixraacaynaa Faylkaaga hore loo heli karo internetka iyo kaas oo laga heli karo iyada oo aan dhibaato weyni laga helin Uptodown. Sida ay ku muujinayaan mareegtooda rasmiga ah, waxaad dooran kartaa inaad faylka toos uga soo degto shabakadda ama aad sidoo kale u isticmaasho kaydka barnaamijyadooda kale, in kasta oo labada xaaladoodba ay jiraan shuruudo lama-huraan ah: inaad haysato noocii ugu dambeeyay ee xirmada Adeegyada Google Play ee kuugu dhejisan. taleefanka RA – waxaan uga tagnay xiriiriyaha hoose si aadan u baahnayn inaad mar kale ku soo laabatid.
Xusuusnow in aad ku rakibto faylka APK taleefankaaga Android, waxaad u baahan tahay inaad siiso rukhsadaha waqtiga. Kuwani waa tillaabooyinka la qaadayo:
Soo degso xirmada (57.17 MB) oo fur
Markaad sidaa sameysid waxaad arki doontaa digniin Chrome ah sababaha amni awgeed, taleefankaagu ma ku rakibi karo barnaamijyo aan la aqoon halka uu ka yimid. Taabo Dejinta
Taabo “rukhsada soo dejisa halkaan” badhanka aad ku arki doonto shaashadda
Waxaad arki doontaa shaashadda shaashadda ku weydiinaysa haddii aad rabto inaad rakibto codsigan
Taabo ku rakib. Sug inta hawshu ka dhamaanayso
Taabo Furan. Waa waqtigii la ciyaari lahaa
Sida aad u arki karto howshu waa mid aad u fudud oo haddii aad horey u soo dejisey oo aad ku rakibtay APKs kale talefoonkaaga, howshu waa isku mid, sidaa darteed ma lahan dhibaatooyin waaweyn.
Ciyaarta dariiqa ayaa ku jirta Isbaanish wuxuuna weydiisan doonaa in koontadaada Microsoft ay ku sii wadato ciyaarta (xusuusnow in Mojang uu qeyb ka yahay Xbox Game Studios). Inbadan oo kuu sheega Waqti ayey qaadataa in la abuuro dhismo aan macquul aheyn adigoon taleefan kula joogsan.